Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud ee Qarramada Midoobey ee Soomaaliya, Danjire James Swan ayaa magaalada Muqdisho ka wada kulamada looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee doorashooyinka xallinta khilaafaadka iyo militariga gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya.
James Swan maanta Ra’iiisal wasiir ku xigeenka soomaaliya maxamed mahdi guulleed wuxuu muujiyey sida uu ugu qanacsanyahay doorashada horaantii looga hadlayo sanadka 2021.
“Waxaan ku qaabilay xafiiskeyga Amb. James Swan. Waxaan ka wada hadalnay mudnaanta dalka, oo ay ka mid yihiin doorashooyinka 2021. “ ayuu yiri Mahdi Maxamed Guuleed Khadar.
Dhinaca kale, Ergeyga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Danjire James Swan ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay Hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, waxayna ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dadaalada socda. Habsami u socodka doorashooyinka qaranka iyo xalinta tabashooyinka heshiiskii doorashada ee u dhaxeeyay Hogaamiyayaasha Dowladda Federaalka iyo Hogaamiyayaasha Dowladaha xubnaha ka ah Federaalka..
James Swan ayaa dhankiisa ku celiyey ahmiyada ay leeyihiin Hogaamiyayaasha Dowladaha, Gobolka iyo daneeyayaasha kale ee gorgortanka iyo xalinta arrimaha doorashooyinka.
Ergeyga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Danjire James Swan ayaa xalay khadka taleefoonka ee Internetka la qaatay Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Soomaaliya iyo Hogaamiyaha gobolada ay is hayaan, waxayna ka wada hadleen horumar hor leh oo looga gaarayo arrinta gobolka.
Weli waxaa taagan khilaafka u dhexeeya Villa Soomaaliya, qaar ka mid ah hogaamiyayaasha maamul goboleedyada iyo musharraxiinta mucaaradka oo ku saabsan qaabka ay dowladda u maareysay doorashada, taas oo loo arko mid hal dhinac ah.
axadle 6199 posts
Qimeynta: Ayaa Horyaalka ugu fiican kooxda